ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ သမိုင်းမတင်မီခေတ်က ထွင် ခဲ့တဲ့လူ့ငရဲပဲ သီရိမာ | ဥက္ကာကိုကို
ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ သမိုင်းမတင်မီခေတ်က ထွင် ခဲ့တဲ့လူ့ငရဲပဲ သီရိမာ	Posted by oakkarkoko on January 19, 2011
Posted in: ကဗျာ.	2 Comments
အွန်လိုင်းပေါ်မှာမဆဲရဘူးလို့ ဘယ်စောက်ဂျီးနီးယပ်စ်တွေ သတ်မှတ်ခဲ့သလဲ
မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမသားဖြစ်မှ အဆဲတတ်တာမဟုတ်ဘူး မြန်မာနိုင်ငံမှာ
တက္ကသိုလ်တစ်ခုက ဆင်းလာတဲ့လူငယ်လေးတွေလည်း အဆဲနည်းပေါင်းစုံတာပဲ
စောက်ကော်နက်ရှင်နဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာ အဆင်မပြေဘူးအသံတွေ ငါတို့ခေတ်မှာ လှိုင်လှိုင်ဝေရဲ့
ဘဲကြီးတစ်ပွေကငါ့ကိုခေါ်တယ် … စောက်ကလေးတဲ့
ငါက ဘိုးတော်တစ်ပါးကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်… စောက်လူကြီးလို့….
ဒီခေတ်မှာ ဘုရားသခင်တောင် ပိုးစိုးပက်စက်အဆဲခံနေရတယ်
အရက်ကလေးနည်းနည်းဝင်တာနဲ့ လီးနဲ့စောက်ကို မရိုးအောင်သုံးပြီး
“အဲဒီညက အဲ့စောက်ဖာသည်မကို လူမဆန်အောင်ချပြီး စောက်ဆံမပေးဘဲပြန်လွှတ်လိုက်တယ် ´´
ဘလော့ဂ်ကဗျာတွေ လိင်စကားနဲ့မကင်းတာ လူကြီးမင်းစောက်လုပ်မဟုတ်ဘူး
ဒီခေတ်နဲ့ ဒီကမ္ဘာ ဒီနေရာမှာ အရှုပ်ထုပ်တွေ ဒီလို ဒီလို ဒီအတိုင်းဖြစ်ပျက်နေ
စောက်ကြီးစောက်ကျယ်နဲ့ ဖင်ခေါင်းကျယ်နေတဲ့ မရိုးသားမှုမျက်လုံးတွေကို ဆဲဆိုနေ
ဆဲဆိုခြင်းဟာ ဂျီတော့ခ်ပေါ်မှာ၊ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ၊ ကော်နက်ရှင်ပေါ်မှာ၊ ဘလော့ဂ်တွေပေါ်မှာ
“ရှင်သိပ်အဆဲသန်တာပဲ ရှင့်လိုယဉ်ကျေးမှုမရှိတဲ့ လူ့ပြိတ္တာမျိုးမမြင်ဖူးသေးဘူး ´´
အင်တာနက်သုံးပါ ကွန်ဒုံးသုံးပါ ……
ငါတို့ခေတ်မှာ စည်းဘောင်တွေကို ရိုက်ချိုးကြတယ် ဂုဏ်သိက္ခာတွေကို ရိုက်ချိုးကြတယ်
မအေပေး နှမပေး ဆဲဆိုခြင်းတွေနဲ့ ပွင့်လင်းတဲ့လူ့ဘောင်ကိုချီတက်ကြတယ်
လူကြီးမင်းအားလုံးကို ကန်တော့ပါသေးရဲ့။ ။
← အဲဒီလို တဖြည်းဖြည်း နီးမလိုနဲ့ဝေး	မျက်နှာဖုံးတပ်ပြီးအော်သလား →	2 comments on “ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ သမိုင်းမတင်မီခေတ်က ထွင် ခဲ့တဲ့လူ့ငရဲပဲ သီရိမာ”
ဥက္ကာကိုကို on February 10, 2011 at 5:08 am said:
ကျော်ညိုသွေး on February 10, 2011 at 2:54 am said: